Dagaalkii maleeshiyada Somaalida iyo Oromada oo sii Laba Lixaad-saday. | ogaden24
Dagaalkii maleeshiyada Somaalida iyo Oromada oo sii Laba Lixaad-saday.
Wararka ka imaanaya wadanka Ogadenia waxay sheegayaan inay Laba Lixaad-sadeen dagaaladii udhaxeeyay Labada maleeshiya maamul ee Oromada iyo Somaalida.
Warkan oo ay soo Tabisay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in hulaaqa colaada ka aloosan xuduuda Ogadenia iyo Oromia ay sitoos ah ugu lugleedahay xukuumada gumaysiga Itoobiya.
Kooxda TPLF oo dhex dabaalanaysa mowjado kacdoono iyo qul qulatooyin siyaasadeed, ayaa dadaal ugashay sidii ay isugu mashquuli lahaayeen shucuubta kala duwan ee kasoo horjeeda xukunka xaaraanta ah ee kooxda TPLF.
Dagaaladan oo galaaftay nolosha dad farabadan oo shacabka Ogadenia iyo Oromia ah ayaa fulintiisa loo xilsaaray kooxaha Hawaarinta ee loosameeyay gumaadka labada shacab waxayna bartilmaameed sanayaan labada shacab ee labada wadan kala dagan si ay colaadu u noqoto mid Qowmi ah oo muda dheer Qaadata.
Dagaaladan ayaa si isdaba joog ah uga socda deegaanada xuduuda kuteedsan oo dhan sida Jinicsani, Fayaanbiiro, Ibraamuuse, Cobosha, Muluqamayo, Salaxaad, Raaso, Dharaayo, Jarati, Nagayle, Ceelkari, Dhagasufti iyo deegaano kale oo xuduuda kuteedsan.
Colaadan oo ah mid si ulakac ah loo hurinayo una muuqata mid Woyanuhu kagaadheen dantii ay kalahaayeen, ayaanay ilaa iyo haan kahdlin kooxda maqaar saar Xayle, taasi oo cadaynaysa ee kooxda EPRDF leedahay masuuliya shacabka lagu xasuuqayo deegaamada u dhexeeya Oromia iyo Ogadenia.